Shoora VPN Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android | APKOLL
Miarahaba antsika rehetra, miverina indray izahay miaraka amin'ny fampiharana Android hafa mahagaga ho anareo rehetra, izay fantatra amin'ny anarana hoe Shoora VPN. Izy io no Tambajotra tsy miankina virtoaly farany indrindra, izay ahafahanao mivezivezy amin'ny Internet soa aman-tsara. Izy io koa dia manome fidirana amin'ny tranonkala sy fampiharana voafehin'ny firenena.
Araka ny fantatrao dia ny Internet no fomba tsara indrindra hizarana ny fahalalanao amin'ny olona hafa manerana izao tontolo izao. Iray amin'ireo sehatra tsara indrindra ahafahan'ny tsirairay mahazo vaovao, fifandraisana, fialamboly, sy ny maro hafa, saingy misy foana ny voka-dratsin'ny zava-drehetra.
Loza ny voka-dratsin'ny Internet. Ny fisidinana amin'ny Internet dia atahorana haka data manan-danja, fampahalalana manokana, ary orinasa maro hafa manandanja. Ny olana hafa dia ny fameperana ny firenena, ny firenena samy hafa, ny tranokala samy hafa voarara ary ny fampiharana ao amin'ny firenena. Mety ho hafa ny antony, saingy mijaly foana ireo mpampiasa an'io tranonkala sy fampiharana io.
Noho izany dia eto izahay miaraka amin'ity fampiharana Android farany ity, izay manome vahaolana tsara indrindra amin'ny olana rehetra amin'ny Internet. Misy endri-javatra marobe amin'ity fampiharana ity, izay manome tanana ambony amin'ny VPN hafa rehetra. Hizara ny momba ity fampiharana ity izahay, koa mijanòna aminay ary fantaro ny momba izany.
Topimaso momba ny Shoora VPN App
Izy io dia fampiharana Android, izay novolavolain'ny ShooraVPN Team. Manolotra fiarovana tsara indrindra ho an'ireo mpizaka tranonkala izy io ary manome fidirana amin'ny tranokala fandrarana ny firenena rehetra koa izy io. Fitaovana maimaim-poana izy io, izay azonao ampiasaina nefa tsy mandoa denaria tokana.
Amin'ny surfing amin'ny Internet, ireo hackers dia vonona ihany koa haka ny angona saro-pady anao. Soso-kevitra tsotra fotsiny no ilainy ary ho azon'izy ireo ny angonao rehetra. Matetika ny mpijirika dia mahita olona hafa amin'ny alàlan'ny adiresy IP-ny. Noho izany, ity fampiharana ity dia manolotra fiarovana ara-miaramila, izay manova ny adiresy IP-nao, ary tsy misy mahita anao.
Manolotra mpizara firenena 30 mahery. Noho izany, raha te hiditra amin'ny karazana tranonkala voafetra ny firenena, ny mpampiasa dia afaka manova ny mpizara ary miditra aminy. Manome fifandraisana haingana izy io ary manova ny toerana araka ny mpizara. Io no fomba tsara indrindra hitsidihana tranokala fandrarana.
Ny dingana mitovy amin'ny fidirana amin'ny fampiharana fandraràna. Fantatrao ny mitsidika fampiharana voarara, mila fifandraisana Internet haingana ianao, satria mety ho very ny kaonty amin'ny fampiasana VPN. Noho izany, ity VPN dia manolotra fifandraisana haingam-pandeha, izay ahafahanao mampiasa fampiharana rehetra ao anatin'izany ny fampiharana lalao, toa ny PUBG sy ny hafa manana ping ambany.
Ny lohamilina marobe dia iray amin'ireo endri-javatra tsara indrindra amin'ity fampiharana ity satria mampizarazara ny fifamoivoizana ary manome fifandraisana milamina ho an'ny mpampiasa tsirairay. Iray ihany no olana amin'ity app ity, dia ny Ads. Fampiharana maimaim-poana izy io, saingy misy doka pop-up, izay tsy maintsy ataonao tsinontsinona.
Tsy mipoitra ny doka rehefa mandeha na milalao, fa hipoitra rehefa tsy mandeha ianao. Noho izany, alaivo ity fampiharana ity ary ampidino ny fameperana rehetra. Raha manana fanontaniana momba ity app ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
anarana Shoora VPN
Anaran'ny fonosana com.free.vpn.shoora
Developer Ekipa Shoora VPN
Misy ny fampiharana hafa, eny an-tsena, izay milaza fa manolotra serivisy mitovy amin'izany. Saingy manome an'ity fampiharana ity izahay izay mety. Noho izany, hizara ny sasany amin'ireo tena mampiavaka an'ity fampiharana ity izahay, aminareo rehetra ao amin'ny lisitra etsy ambany.
Tsidiho ny tranokala fandrarana
Midira amin'ny fampiharana izay teren'ny firenena
Servers marobe dia manome fifandraisana haingana sy malefaka
Servers mihoatra ny 1000 eran'izao tontolo izao
Mifanaraka amin'ireo fitaovana Android farany ambany
Manana VPN mitovy amin'izany ho anareo rehetra izahay, manantena fa tianao koa izy ireo.
Hita ao amin'ny Google Play Store izy io ary mizara rohy azo antoka sy miasa amin'ity app ity ihany koa izahay. Noho izany, raha te-hisintona azy amin'ity pejy ity ianao dia tadiavo ny bokotra fampidinana. Ny bokotra fampidinana dia hita eo amin'ny ambony sy ambany amin'ity pejy ity. Tsy maintsy manindry azy ianao ary manomboka mandeha ho azy ny fampidinana.
Shoora VPN Apk no fampiharana tsara indrindra ho an'ny mpikirakira tranonkala. Io no fomba fiarovana tsara indrindra hampihenana ny mety hisian'ny angona. Ampidino ity fampiharana ity ary mahazo fidirana amin'ny fampiharana sy tranokala rehetra. Tsidiho hatrany ny tranokalanay, raha te hahita fampiharana mahafinaritra kokoa.
Sokajy Tools, Apps Tags Shoora VPN, Shoora VPN Apk, Shoora VPN App, VPN Post Fikarohana